C Ronaldo နဲ့ Messi တို့ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲကို စီးရီးအေမှာ ဆက်ပြီး မြင်တွေ့ရမလား
Cristiano Ronaldo နဲ့ Messi တို့ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲကို စီးရီးအေမှာ ဆက်ပြီး မြင်တွေ့ရမလား
24 Jul 2018 . 5:49 PM
မကြာသေးခင်က စီးရီးအေထိပ်သီး ဂျူဗင်တပ်စ် Juventus အသင်းကို စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခု သူ့ရဲ့အဓိက ပြိုင်ဘက် မက်ဆီ Messi ကလည်း စီရော်နယ်လ်ဒို ခြေရာကို လိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စီးရီးအေနာမည်ကျော် အင်တာမီလန် Inter Milan အသင်းက မက်ဆီကို ခေါ်ဖို့ ချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုပြီး အီတလီမီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေကြလို့ပါပဲ။ တစ်ချိန်က စီးရီးအေမှာ ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပြီး အသင်းပုံရိပ်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ အသင်းပိုင်ရှင်အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပြဿနာပေါင်းစုံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန်အသင်း ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ တစ်ကျော့ပြန် ဦးမော့လာဖို့ ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီး လာမယ့်ရာသီကျရင် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရထားတာကြောင့်လည်း ကစားသမားသစ်တွေကို အားဖြည့်ဖို့ စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက ပေါ်တူဂီနာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ယူရိုသန်း(၁၀၀)နဲ့ ခေါ်ယူပြီးချိန်မှာ အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း အားကျမခံ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ပြိုင်ဘက် မက်ဆီကို ကမ်းလှမ်းဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မက်ဆီနဲ့ဘာစီလိုနာတို့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရ လျော်ကြေးအဖြစ် ပေါင်(၆၂၆)သန်းအထိ ပေးချေရမှာဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီပမာဏအထိ အင်တာမီလန်အသင်း အကုန်အကျခံနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ အဓိက စပွန်ဆာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Pirelli ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Provera က “တကယ်လို့ UEFA က ချမှတ်ထားတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးမျှခြေစည်းမျဉ်း(Financial Fair Play)နဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင် ဆန်နန်းကုမ္ပဏီ(အင်တာမီလန်အသင်းကို ပိုင်ဆိုင်သည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီ)ဟာ နာမည်ကြီးကစားသမားတစ်ဦးကို ငွေကြေးအမြောက်အမြားသုံးစွဲပြီး ခေါ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မက်ဆီကို ခေါ်ဖို့လား။ မက်ဆီလိုကစားသမားမျိုးကို ဘယ်သူက မခေါ်ချင်ဘဲနေမှာလဲ”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုကိုတော့ လာလီဂါမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ၊ စီးရီးအေပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ Battle ကို ဆက်ပြီးတွေ့ရမလားဆိုတာကတော့ . . .
Cristiano Ronaldo နဲ့ Messi တို့ရဲ့ အားပွိုငျပှဲကို စီးရီးအမှော ဆကျပွီး မွငျတှရေ့မလား
မကွာသေးခငျက စီးရီးအထေိပျသီး ဂြူဗငျတပျဈ Juventus အသငျးကို စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ပွောငျးရှခေဲ့ပွီးတဲ့နောကျ အခု သူ့ရဲ့အဓိက ပွိုငျဘကျ မကျဆီ Messi ကလညျး စီရျောနယျလျဒို ခွရောကို လိုကျဖို့ ပွငျဆငျနပေါပွီ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ စီးရီးအနောမညျကြျော အငျတာမီလနျ Inter Milan အသငျးက မကျဆီကို ချေါဖို့ ခြိတျဆကျနတေယျဆိုပွီး အီတလီမီဒီယာတှကေ ဖျောပွနကွေလို့ပါပဲ။ တဈခြိနျက စီးရီးအမှော ထိပျတနျးအသငျးတဈသငျးဖွဈခဲ့တဲ့ အငျတာမီလနျအသငျးဟာ ၂၀၁၀ ခုနှဈနောကျပိုငျး အောငျမွငျမှုနဲ့ဝေးကှာခဲ့ပွီး အသငျးပုံရိပျကလညျး တဖွညျးဖွညျးကဆြငျးလာခဲ့တယျ။ အခုနောကျပိုငျးနှဈတှမှော အသငျးပိုငျရှငျအပွောငျးအလဲတှနေဲ့ ပွဿနာပေါငျးစုံဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အငျတာမီလနျအသငျး ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ တဈကြော့ပွနျ ဦးမော့လာဖို့ ပွငျဆငျနတောဖွဈပွီး လာမယျ့ရာသီကရြငျ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့ရထားတာကွောငျ့လညျး ကစားသမားသဈတှကေို အားဖွညျ့ဖို့ စီစဉျနပွေီဖွဈပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက ပျေါတူဂီနာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုကို ယူရိုသနျး(၁၀၀)နဲ့ ချေါယူပွီးခြိနျမှာ အငျတာမီလနျအသငျးကလညျး အားကမြခံ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ပွိုငျဘကျ မကျဆီကို ကမျးလှမျးဖို့ ပဈမှတျထားနတောပါ။ ဒါပမေဲ့ မကျဆီနဲ့ဘာစီလိုနာတို့ ခြုပျဆိုထားတဲ့စာခြုပျအရ လြျောကွေးအဖွဈ ပေါငျ(၆၂၆)သနျးအထိ ပေးခရြေမှာဖွဈတာကွောငျ့ အဲဒီပမာဏအထိ အငျတာမီလနျအသငျး အကုနျအကခြံနိုငျပါ့မလားဆိုတာ စဉျးစားစရာပါပဲ။
အငျတာမီလနျအသငျးရဲ့ အဓိက စပှနျဆာကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ Pirelli ရဲ့ CEO ဖွဈသူ Provera က “တကယျလို့ UEFA က ခမြှတျထားတဲ့ ဘဏ်ဍာရေးမြှခွစေညျးမဉျြး(Financial Fair Play)နဲ့ ကိုကျညီတယျဆိုရငျ ဆနျနနျးကုမ်ပဏီ(အငျတာမီလနျအသငျးကို ပိုငျဆိုငျသညျ့တရုတျကုမ်ပဏီ)ဟာ နာမညျကွီးကစားသမားတဈဦးကို ငှကွေေးအမွောကျအမွားသုံးစှဲပွီး ချေါယူနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ မကျဆီကို ချေါဖို့လား။ မကျဆီလိုကစားသမားမြိုးကို ဘယျသူက မချေါခငျြဘဲနမှောလဲ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ၊ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီတို့ရဲ့ အားပွိုငျမှုကိုတော့ လာလီဂါမှာ မွငျတှခေဲ့ရပွီးပါပွီ၊ စီးရီးအပွေိုငျပှဲမှာလညျး ဒီနှဈယောကျရဲ့ Battle ကို ဆကျပွီးတှရေ့မလားဆိုတာကတော့ . . .